“Bae” ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသုံးသာသုံးနေပေမဲ့ ဘာအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်ဆိုတာရော သိကြရဲ့လား? – Trend.com.mm
Posted on July 4, 2018 November 20, 2018 by Noel
အင်တာနက်ခေတ်ကြီးထဲမှာ စကားလုံးအတိုတွေ တွေ့ရများလာတာကို သတိထားမိကြမှာပါ။ IDC (I Don’t Care)၊ IMU (I miss you) ၊BRB (be right back ) ၊ RU ( are you? )စသဖြင့်ပေါ့။နောက်တစ်ခု RS တွေကြားထဲမှာအသုံးများလာတဲ့စကားလုံးတစ်ခုကတော့ BAE ဆိုတဲ့စကားလုံးပါပဲ။ဒီစကားလုံးကို အားလုံးက Baby၊babe ရဲ့ အတိုကောက်လို့ထင်နေကြပေမဲ့ တကယ်တော့ စကားလုံးရဲ့ အရှည်က “before anyone else”ဆိုတာပါတဲ့။တစ်စုံတစ်ယောက်ရဲ့ ချစ်သူမိန်းကလေး၊ချစ်သူယောက်ျားလေးကိုရည်ညွှန်းချင်တယ်ဆိုရင်လည်း Bae ကိုသုံးတယ်ပေါ့။
ဥပမာ ကျွန်တော့်ကောင်မလေးနဲ့အပြင်သွားဖို့ချိန်းထားတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာ ကျွန်တော့် Bae နဲ့ အပြင်သွားဖို့ချိန်းထားတယ်လို့သုံးတာမျိုးပေါ့။ဒီ Bae ဆိုတဲ့စကားလုံးကို အရမ်းမိုက်တယ်၊ အရမ်းဆန်းတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်အဖြစ်လည်းသုံးလို့ရပါသေးတယ်တဲ့။ဒီစကားလုံးက
လူငယ်တွေကြားထဲမှာအများဆုံးသုံးကြပြီး Babe ၊ Boo စတဲ့စကားလုံးရဲ့ အစားထိုးအဖြစ် လည်းသုံးလာကြပါတယ်။
ဒီ Bae ဆိုတဲ့စကားရဲ့ အစကတော့၂၀၁၄မှာဖြန့်ချီခဲ့တဲ့ နာမည်ကျော်အဆိုတော်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Pharrell Williams ရဲ့ ”Come Get It Bae” ဆိုတဲ့သီချင်းကနေ စတယ်လို့ပဲပြောလို့ရပေမဲ့ အတိအကျကြီးတော့ ဘယ်ကစလာမှန်းမသိကြသေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့ ဒါက အရေးတော့ မကြီးပါဘူး။ဘယ်ကပဲစစ အခု Bae ဆိုတဲ့စကားလုံးကြီးက ပျောက်မသွားပါဘူး။Bae ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုဒီနေ့ခေတ်ကြီးမှာ ဘယ်လိုတွေသုံးကြတယ် ၊ဘယ်လိုတွေသုံးရလဲဆိုတာ ဗဟုသုတအနေနဲ့ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
* I love you, bae.
* I can’t go out; bae and I are going onadate.
* Melissa’s haircut is bae.
* I miss my bae.
* He/She is my bae; I can’t imagine life without him/her.
* What do you want to do tonight, bae?
* I’m sorry, bae. I didn’t mean to upset you.
* That outfit is bae.
* No one can replace bae.
* I’ll catch you later. I’m going to see bae ဆိုပြီးသုံးကြပါတယ်။
Bae ဆိုတာ ကိုယ်ချစ်ရတဲ့တစ်စုံတစ်ယောက်ကိုရည်ညွှန်းခေါ်လို့ရသလို အရမ်းမိုက်တယ် ဆိုတဲ့စကားအဖြစ်လည်းသုံးလို့ရတယ်ဆိုတာလေးကိုဗဟုသုတအနေနဲ့ ဖော်ပြပေး လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။
အငျတာနကျခတျေကွီးထဲမှာ စကားလုံးအတိုတှေ တှရေ့မြားလာတာကို သတိထားမိကွမှာပါ။ IDC (I Don’t Care)၊ IMU (I miss you) ၊BRB (be right back ) ၊ RU ( are you? )စသဖွငျ့ပေါ့။နောကျတဈခု RS တှကွေားထဲမှာအသုံးမြားလာတဲ့စကားလုံးတဈခုကတော့ BAE ဆိုတဲ့စကားလုံးပါပဲ။ဒီစကားလုံးကို အားလုံးက Baby ၊ Babe ရဲ့ အတိုကောကျလို့ထငျနကွေပမေဲ့ တကယျတော့ စကားလုံးရဲ့ အရှညျက “before anyone else”ဆိုတာပါတဲ့။တဈစုံတဈယောကျရဲ့ ခဈြသူမိနျးကလေး၊ခဈြသူယောကျြားလေးကိုရညျညှနျးခငျြတယျဆိုရငျလညျး Bae ကိုသုံးတယျပေါ့။
ဥပမာ ကြှနျတေျာ့ကောငျမလေးနဲ့အပွငျသှားဖို့ခြိနျးထားတယျဆိုတဲ့နရောမှာ ကြှနျတေျာ့ Bae နဲ့ အပွငျသှားဖို့ခြိနျးထားတယျလို့သုံးတာမြိုးပေါ့။ဒီ Bae ဆိုတဲ့စကားလုံးကို အရမျးမိုကျတယျ၊ အရမျးဆနျးတယျဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့အဓိပ်ပာယျအဖွဈလညျးသုံးလို့ရပါသေးတယျတဲ့။ဒီစကားလုံးက
လူငယျတှကွေားထဲမှာအမြားဆုံးသုံးကွပွီး Babe ၊ Boo စတဲ့စကားလုံးရဲ့ အစားထိုးအဖွဈ လညျးသုံးလာကွပါတယျ။
ဒီ Bae ဆိုတဲ့စကားရဲ့ အစကတော့၂၀၁၄မှာဖွနျ့ခြီခဲ့တဲ့ နာမညျကြျောအဆိုတျောတဈယောကျဖွဈတဲ့ Pharrell Williams ရဲ့ ”Come Get It Bae” ဆိုတဲ့သီခငျြးကနေ စတယျလို့ပဲပွောလို့ရပမေဲ့ အတိအကကြွီးတော့ ဘယျကစလာမှနျးမသိကွသေးပါဘူး။ဒါပမေဲ့ ဒါက အရေးတော့ မကွီးပါဘူး။ဘယျကပဲစစ အခု Bae ဆိုတဲ့စကားလုံးကွီးက ပြောကျမသှားပါဘူး။Bae ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုဒီနခေ့တျေကွီးမှာ ဘယျလိုတှသေုံးကွတယျ ၊ဘယျလိုတှသေုံးရလဲဆိုတာ ဗဟုသုတအနနေဲ့ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျနျော။
* I’ll catch you later. I’m going to see bae ဆိုပွီးသုံးကွပါတယျ။
Bae ဆိုတာ ကိုယျခဈြရတဲ့တဈစုံတဈယောကျကိုရညျညှနျးချေါလို့ရသလို အရမျးမိုကျတယျ ဆိုတဲ့စကားအဖွဈလညျးသုံးလို့ရတယျဆိုတာလေးကိုဗဟုသုတအနနေဲ့ ဖျောပွပေး လိုကျတာဖွဈပါတယျ။